UE Wonderboom, kalitaon'ny feo ary hery amina mpandahateny azo entina | Avy amin'ny mac aho
Rehefa miresaka momba ny mpandahateny mpitatitra finday isika dia tsy afaka tsy hilaza ny maodelin'ny Ultimate Ears, amin'ity tranga ity dia hifantoka amin'ny kely indrindra isika -tsy izay no mahatonga izany. Logitech, ilay UE Wonderboom.
Tamin'ny volana febroary lasa teo dia nanangana fanangonana vaovao an'ity mpandahateny portable ity, ny Wonderboom Freestyle Collection, izay manana toetra sy fika mitovy amin'ny maodely teo aloha saingy manana endrika tanora kokoa ary afaka milaza zavatra adala kokoa aza isika. Ireto drafitra vaovao ireto dia: Concrete, Avocado, patch, Raspberry ary Unicorn.
Amin'io lafiny io dia afaka milaza isika fa mitovy ny atrehantsika Feo madio 360 ° manana ny maodely amin'ny endriny teo aloha, manana fahaiza-manao mitovy amin'ny fanoherana ny rano, ampio ny bateria afaka milalao mozika mandritra ny 10 ora (miankina amin'ny habetsahana), faritra tsy misy tariby Bluetooth misy halavirana 30 metatra fihetseham-po mafy. Ity dia topy topimaso fohy momba ny UE Wonderboom, fa andao jerena akaiky ireo mpandahateny kely nefa mahery ireo.
2 Kalitao feo
3 Ampifanaraho amin'ny UE Wonderboom roa
Amin'ity lafiny ity dia hitantsika fa ny Wonderboom dia manaraka ny tsipika famokarana mitovy ary manana famaranana fingotra ho an'ny tapany ambony sy ambany (mba tsy hikorontana ny latabatra) sy lamba manodidina ireo mpandahateny. Ny famaranana dia manana kalitao tena tsara ary na dia marina aza izany dia tsy afaka milaza isika fa amin'ny toe-javatra sasany dia malina amin'ny resaka famolavolana izy ireo, izany indrindra no tadiavin'ny orinasa, hita fa Wonderboom miaraka amin'ireo goavambe + sy - famantarana eo aloha hampiakarana sy hampihena ny haavony.
Ny mpandahateny dia manolotra kalitaon'ny feo mahatalanjona tokoa. Izany dia manampy ny herin'ny mpandahateny izay manana bas mazava tsara ary mamela antsika hametraka seta mahagaga. Ny Wonderboom, no mpandahateny kely indrindra amin'ny orinasa ary manana hatsaran'ny feo mahatalanjona noho ny refy ananany. Amin'ity tranga ity ary satria miresaka momba ny refy isika dia miatrika mpandahateny 426g fotsiny miaraka amin'ny haben'ny 9,3 x 9,3 x 10,2 cm.
Ampifanaraho amin'ny UE Wonderboom roa
Azontsika atao koa ny mampifangaro roa ny roa amin'ireo mpandahateny kely ireo miaraka ary amin'ity fomba ity ny kalitaon'ny feo miaraka amin'ny herinaratra dia hitombo roa, hamela antsika ho moana. Amin'ny tranga Mac, ny fampifangaroana azy ireo dia tsotra toy ny mitady azy ireo amin'ny Bluetooth sy miasa, ary koa Miaraka amin'ny Mac dia tsy tapaka ny mozika rehefa mahazo antso arak'izay mitranga amin'ny fitaovana finday afaka mankafy mozika tsy miato ianao.
Azontsika atao ny mitondra azy any amoron-dranomasina na eo amin'ny pisinina miaraka amina fandriam-pahalemana tanteraka satria mitsingevana ao anaty rano izy, eny, tsy maintsy ataontsika antoka fa mihidy mafy ny fonony farany manampy ny seranan-tseranana microUSB. Tena tsara ity aMpandahateny Bluetooth azo alefa miaraka amin'ny kalitaon'ny feo mahatalanjona ary ankehitriny isika dia afaka manao izany mahita ny vidiny mihena amin'ny fotoana voafetra amin'ny loko sasany misaotra ny fandefasana ireo endrika vaovao.
Kalitaon'ny feo manaitra sy hery
Famolavolana sy fanoherana ny rano
Isan'ny loko sy maodely azo alaina
Tsy misy mikrôfony hantsoina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Solosaina Mac » Accessories » UE Wonderboom, kalitaon'ny feo ary hery amina mpandahateny azo entina